Jürgen Klopp oo ka hadlay xaalada dhaawacyo ee kooxda Liverpool, kahor kulanka Everton – Gool FM
(Liverpool) 18 Juun 2020. Liverpool uu hogaaminayo tababare Jürgen Klopp ayaa sii wadaysa diyaar garowga xoogan ay ku jirto, kulanka ay kula ciyaari doonto kooxda ay dariska yihiin ee Everton Axada soo socota garoonka Goodison Park.
Liverpool ayaa la ciyaareysa kooxda Everton, kulankeeda ugu horeeya kaddib markii uu horyaalka Premier League ka soo laabtay ku dhawaad 100 maalmood ee loo joojiyay sababa la xiriira caabuqa Coronavirus.
Reds ayaa u baahan kaliya inay adkaato labo kulan si ay u hesho 6 dhibcood isla markaana ay u xaqiijiso in Premier League ay si rasmi ah ugu guuleysato, kaddib muddo dhan 30 sano oo aysan ku guuleysan horyaalka.
Haddaba macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ayaa ka hadlay xaalada dhaawacyo ee kooxdiisa Liverpool, kahor kulanka Everton, wuxuuna yiri:
“Ma jiraan wax dhaawacyo ah ka hor kulanka Liverpool iyo Everton”.
“Ilaa iyo hadda ma jiro ciyaaryahan laga reebay kulanka soo socda, qof walbaa wuxuu heystaa fursad, kaliya waxaa jira ciyaartoy tababarka sameeyay in ka badan kuwa kale”.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Real Madrid iyo Valencia ee horyaalka La Liga oo la shaaciyay